Al-Shabaab oo Gudaha Kenya ku Dishay Saraakiil iyo Ciidamo katirsan booliiska iyo Milatariga Dalkaasi |
Al-Shabaab oo Gudaha Kenya ku Dishay Saraakiil iyo Ciidamo katirsan booliiska iyo Milatariga Dalkaasi
Gaarisa (GNN)-Wararka ka imaanaya Magaalada Gaarisa ee Gobolka Waqooyi Bari Dalka Kenya ayaa sheegaya in shalay galinkii dambe dagaal uu ka dhacay Deegaanka lagu Magacaabo Yumbis oo hoos taga Degmada Gaarisa halkaas ay malamo kahor gaareen Dagaalyahano katirsan Al-Shabaab.
Dgaalyahanada Al-Shabaab ayaa miinooyin ku aasay wadooyinka soo gala Deegaanka Yumbis waxaana Miinooyinkaasi ay la kaceen gaadiid ay wateen ciidamada booliiska iyo kuwa Milatariga Dalka Kenya, waxaana kasoo gaaray qasaarooyn kala duwan.
Waxaa sidoo kale Deegaanka Yumbis ka dhacay iska hor imaad dhax maray Dagaalayahanada AL-Shabaab ee halkaasi ku sugnaa iyo Ciidamada Kenya waxaana weerarkaasi lagu dilay tiro badan oo katirsan Ciidamada Kenya, waxaana jira Warar sheegaya in Gaadiid dagaal laga gubay Ciidamada Kenya.
Afhayeenka Ciidanka Kenya, Kolonel David Obonyo ayaa sheegay in ciidankooda ay dileen 7-dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab, kuwaa uu sheegay in weerar dhab gal ah ku qaadeen kolonyo ay wateen Ciidamada Kenya.
Waxa uu sheegay Afhayeenka in Al-Shabaab kala kulmeen weerar halis ahaa bale ciidankooda ka hor tageen iskana difaaceen, waxa uuna intaa raaciyay in Al-Shabaab ka furteen hub u badan qoryaha AK-47.
Wali si dhab ah looma oga qasaaraha kala gaaray Ciidamada Kenya iyo Dagaalyahanada Al-Shabaab ee ku dagaalamay Gudaha Kenya, waxaana dhawaan Rag hubeesan oo katirsan Al-Shababa lagu arkay Deegaano katirsan Dalkaas kuwaa oo calankooda kataagay Deegaanada ay tageen.